PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2016-12-18 - Ipolitiki inyakazile ngo-2016
Ipolitiki inyakazile ngo-2016
Isolezwe ngeSonto - 2016-12-18 - IMIBONO -
UNYAKA ka-2016 ube wunyaka obunezinto ezinhle nezimbi, abanye baqophe umlando ngawo, abanye ubahlukumezile. JANUWARI *AbeNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS) bamemezela ukuthi bahlela ukuxhasa abafundi abangu-405 000 onyakeni ka-2016.
*Umholi we-Economic Freedom Fighters (EFF) uJulius Malema uvakashela iNkosi yabaThembu uBuyelekhaya Dalindyebo ejele i-East London Correctional Centre e-Eastern Cape. Wayephelekezelwa uSotswebhu we-EFF ephalamende uGodrich Gardee nomkhulumeli wayo uMbuyiseni Ndlozi
*USihlalo we-ANC eWestern Cape uMarius Fransman uvulelwa icala lokuphathaphatha owesifazane. Icala lavulwa esiteshini samaphoyisa eSun City eNorth West. UFransman wayeseNorth West ngesikhathi i-ANC ibhiyozela iminyaka engu104 yasungulwa. FEBHUWARI Abafundi base-University of Free State eBloemfontein bagcoba ngopende isichuse saloyo owayengumengameli uC.R. Swart emva kokuba besokhele ngomlilo. MARCH *OwayeyiPhini likaMengameli we-ANCYL uRonald Lamola uphoqa isigungu esiphezulu ukuthi sithathele uMengameli Jacob Zuma izinyathelo ngokuxhumana kwakhe nomndeni wakwaGupta nokuthinteka kwayo ekuqokeni ongqongqoshe. *IPHINI likaNgqongqoshe wezeziMali uMcebisi Jonas uqinisekisa ukuthi abakwaGupta bamgabisela ngemali nesikhundla sikangqongqoshe wezezimali kodwa wenqaba. EPHRELI IPHALAMENDE libe nenkulumo mpikiswano ngokuthi uMengameli Jacob Zuma kumele ehliswe esikhundleni sokuhola izwe. Amaqembu aphikisayo abenza isiqiniseko sokuthi njalo uma uZuma ezophendula imibuzo ethile ephalamende amphazamise abuze ngodaba lwaseNkandla.
Ngokuhamba kwesikhathi umengameli Zuma uxolisile esizweni ngendlela asingatha ngayo udaba lwezindleko zokulungiswa komuzi wakhe oseNkandla wagcina ekhokhile. MEYI Okunye okuphakamise amehlo ukwesula esikhundleni kukaMnuz Senzo Mchunu kwesokuba nguNdunankulu waKwaZulu-Natal singakashayi isikhathi sokuthi ehle esikhundleni. Kwavela ukuthi uMchunu akazesulelanga kodwa waphoqwa yi-ANC. JUNI UKUKLANYWA kwemingcele kabusha kuqhathe uhulumeni nomphakathi ongahambisani nokufakwa ngaphansi kukamaspala iMalamulele. Lokhu kuholele ekushisweni kwezikole ezingu-24 nezakhiwo zikahulumeni kule ndawo. JULAYI: *INational Freedom Party eyasungulwa uNkk Zanele kaMagwaza-Msibi, igqemeke engeqiwa ntwala ngesikhathi likhishwa ohlwini lwamaqembu angenele ukhetho.
Kuze kube manje akucaci ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abaholi baleli qembu bakhohlwe usuku olungumqamulajuqu lokukhokhwa kwemali yokubhalisela ukhetho kwiKhomishani yoKhetho. Kusolwe unobhala weqembu uMnuz Xolani Ndlovu ngokwenzela phansi iqembu. AGASTI: *Ngo-Agasti 3 iNingizimu Afrika iba nokhetho lohulumeni basekhaya. Kuphenduka amatafula i-ANC ihlulwa yiDA komasipala abayiMetro eNelson Mandela Bay, Tshwane naseGoli.
*Kuqopheke umlando ngesikhathi uNkk Zandile Gumede eqokwa eba yiMeya yokuqala yesifazane yeTheku. SEPTHEMBA UZuma ugcine eyikhokhile imali uR7.8 million wokuqinisa ezokuphepha emzini wakhe oseNkandla. Imali wayibolekwa abeVBS Mutual Bank, eseVenda. OKTHOBA *UMengameli uJacob Zuma umemezela ngokusemthethweni ukuqokwa koMvikeli woMphakathi omusha u-Adv Busisiwe Mkhwebane, ongena ezicathulweni zika-Adv Thuli Madonsela.
*Isinqumo sokuphuma kweNingizimu Afrika enkantolo yomhlaba yamacala i-International Criminal Court sishayelwe ihlombe ngabanye kuthiwa akhona namanye amazwe asephumile kuyo.
*Umbhikisho wabafundi iFees Must Fall ibuye ngamandla ngemuva kokumenyezelwa kokwenyuka kwemali yokufunda ngonyaka ozayo. Kuthikamezeka ukufunda eWits University, UKZN, University of Cape Town namanye amanyuvesi. Kuboshwe nabafundi okumanje kusekhona abatokile.
Izikhungo eziningi zigcina ngokuyinyusa ngo-8% imali yokufunda.
*IPhini likaNgqongqoshe loMbutho wezokuVikela eNingizimu Afrika uMnuz Kebby Maphatsoe, ungene ehlazweni evela ku-twitter enowesifazane enqunu ehhotela.
*Kuvele izindaba zokubekwa kwamacala okukhwabanisa kukaNgqongqoshe wezeziMali kuleli uMnuz Pravin Gordan. UGordhan ubesolwa ngokuthi akayilandelanga imigomo ngesikhathi egunyaza ukuthathwa kwempesheni ngaphambi kwesikhathi kukaMnuz Ivan Pillay ngesikhathi esewukhomishana kwaSars ngo-2010. Kusukela evulelwa lamacala uGordhan kwaba nezinsolo zokuthi uZuma umbophele amanqina enyathi.
Ekupheleni kuka-Okthoba oyiNhloko yezokuShushisa u-Adv Shaun Abrahams uwahoxisile amacala kaPravin.
*UMengameli we-EFF, uMnuz Julius Malema uthweswe amacala amabili yinkantolo yaseBlomfontein neyaseNewcasetle. EBlomfontein wathula enkulumo ngo-2014 ethi uma kunomhlaba ongenabantu kumele uthathwe. ENewcasetle wathi abamhlophe akumele bazitshele ukuthi banomhlaba kodwa ungowabantu abamnyama. NOVEMBA *Kuvumbuka umbiko wokugcina woMvikeli woMphakathi u-Adv Thuli Madonsela wokudliwa kwamandla oMbuso ngumndeni wosomabhizinisi wakwaGupta. Kwavela ukuthi baningi osopolitiki abake bavakashela emzini wakwaGupta eSaxonworld.
*Isikhulu esiphezulu sakwa-Eskom uMnuz Brian Molefe othinteka embikweni kaMadonsela uyasula esikhundleni.
*UNgqongqoshe wezobuNhloli kuleli uMnuz David Mahlobo umataniswe nosomabhizinisi waseChina uGuan Jiang Guang osolwa ngokushushushumbisa izimpondo zobhejane. DISEMBA UMnuz Cyril Ramaphosa uveza ukuthi angakujabulela ukungenela esikamengameli isikhundla uma sekuvela ithuba noDkt Nkosazana Dlamini Zuma othwelwe ngeqoma yi-ANC Youth League usembangweni wesikhundla.